Akụkọ Akpado "Egwuregwu na njem" - ULLER
Otu edemede niile Akụkọ Egwuregwu na njem Entretenimiento Ndị mmadụ Ihe omuma na ihe omuma Ahụike na Ọzụzụ Ụdị Njem na Ebe
Obi abụọ adịghị ya na ịgba ịnyịnya ígwè bụ otu n'ime egwuregwu ndị na-akpali agụụ kachasị n'etiti ndị na-eme ya, yana maka ọha na eze na-elegharị anya, ndị na-eche na ọ bụ ha bụ ndị ahụ zigoro na mkpọda tupu Mont Ventoux. Know maara ihe anyị na-ekwu? Taa isiokwu anyị ga-agwa gị ihe ndị kasị mkpa mere na akụkọ ihe mere eme nke Njem de France, asọmpi ahụ na akụkọ ihe mere eme nke na-ejikọ ọnụ kacha mma n'ụwa kwa afọ.
Ọ bụrụ na ị bụ onye na-achọ ịgba ịnyịnya ígwè na egwuregwu a gụnyere, ikekwe ị maraworị njem njem kacha mkpa na Spain; Ugo Ubi Bearded. Ọ ga-abụ mbinye aka gị ọzọ ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-akwado ọzụzụ a. Iji mụtakwuo banyere ịmata nke njem a, echefula post nke taa!
You nwetụla mgbe ị na-eche otú, ebe na mgbe mere nke mbụ igwe? Wasnye bụ amamihe ahụ nke hapụrụ anyị ọmarịcha ụzọ njem a? Kedu ihe kpatara eji asọmpi gọọmentị agba ịnyịnya? Enwere ọtụtụ ajụjụ nwere ike ịbịara anyị banyere egwuregwu a. Ọ bụ ya mere anyị ji ewetara gị ọkwa a banyere ịgba ịnyịnya ígwè na omimi ma anyị dozie ụfọdụ obi abụọ gị.
Naanị ndị anyị na-eme agba ịnyịnya anyị maara ahụ ọkụ nke na-agafe na akwara anyị mgbe anyị na-ele asọmpi ahụ site na sekit kachasị achọ na Europe. Mara ihe Ihe Ncheta linggba ígwè ma ọ bụ na-akpọkwa 5 ochie nke ịgba ígwè; agbụrụ nwere ọtụtụ akụkọ ntolite, nke na-akwadebe ndị ọgba tum tum ike kachasị ike ihu nnukwu asọmpi. Want chọrọ ịmatakwu?
Egwuregwu na enweghị iwu? Ọfọn ... enwere ike ịnwe ụfọdụ nnwere onwe na omume nke skai Freeride, ma buru n’obi na ka nnukwu ntọhapụ ka ibu, ibu ọrụ dị ukwuu. Soro ndụmọdụ anyị na-akụziri gị n'isiokwu anyị taa, ma nwee ọ enjoyụ n'ugwu ya dị ọcha!
Ima ebe okwu si puta Enduro? ntachi obi, nke n’asụsụ Bekee pụtara, iguzogide. Ma ọ bụ na nke a modality nke MBTỌ chọrọ ntachi obi, ọsọ ọsọ na nnwere onwe. N'isiokwu anyị taa, anyị na-akuziri gị ihe niile ịchọrọ ịma ma ọ bụrụ na ị na-eche ịrara onwe gị nye enduro igwe kwụ otu ebe MBT, otu n'ime ụdị kachasị njọ na ọchị nke ịgba ịnyịnya ugwu.
Ihe ịma aka na ikike mmadụ nwere imeri ha. Nwere ike iche n’echiche ime kilomita 226 n’agbata ọsọ, igwu mmiri na ịgba ịnyịnya ígwè, n’ime ihe na-erughị awa 17? E nwere ndi mmadu di elu, ma ndia bu ndi isi nke post anyi taa, ebe anyi na-akuziri gi ihe nile banyere Ironman: asọmpi a nke na-eme ka ị rute, njedebe kachasị ike na mmetụta dị n'ahụ anyị, ị ga-anwa anwa ime otu n'ime ndị a ?
Rịgo ugwu bụ nnwere onwe bụ okwu kachasị ya! Isiokwu a bụ maka ndị hụrụ gị n'anya nke freeride bụ ndị n'afọ a nwere agụụ karịa ka ha na-eche na adrenaline na-agba ọsọ na veins ha. Lelee aro egwuregwu anyị na-atụ ugwu ... Gwa anyị n'ike mmụọ nsọ!